» केपि ओलिको नारायणकाजिलाइ धम्की ! भिडियो बहिर ल्याइदिउँ ? हेर्नुहोस केपि ओलिको नारायणकाजिलाइ धम्की ! भिडियो बहिर ल्याइदिउँ ? हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
केपि ओलिको नारायणकाजिलाइ धम्की ! भिडियो बहिर ल्याइदिउँ ? हेर्नुहोस
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक संकट यतिबेला चरित्रहत्याको तहसम्म पुगेको छ । बिहीवार बिहान नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वराजदूत कमानसिंह लामाको निधन भएलगत्तै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि लामाको लेनदेनलाई मध्यस्थता गरेको कुराकानीको अडियो र भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपक्षीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूले श्रेष्ठमाथि भ्रष्टाचार तथा नैतिकताको कुरा उठाउँदै एकतर्फी प्रहार गरिरहेका छन् ।
’तपाईं आफैं भन्नुभएको होइन मलाई आर्थिक अभाव छ, पार्टीले केही खर्च धान्दिएदेखि सहज हुन्थ्यो भनेर,’ ओली र श्रेष्ठको भनाइ सुनेका प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले ओलीको भनाइ उदृत गर्दै भने, ’अहिले ढोंग गर्ने ? कहाँबाट आएको छ पैसा ? बरू मलाई थाहा छ, तपाईको कुन कुन हाइड्रोपावरमा सेयर छ । कोको सँग आर्थिक लेनदेनमा हुनुहुन्छ भनेर ।’
त्यतिबेलै नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । ओलीले सबैकुरा बाहिर ल्याइदिने धम्की दिएपछि श्रेष्ठले जवाफ फर्काए, ’मैले गल्ती गरेको छैन । हाइड्रोको सेयर मेरो होइन । मैले मध्यस्थता गर्न खोजेको मात्र हुँ ।’
’ओलीले त्यतिबेलै अडियो र भिडियो बाहिर ल्याइदिने धम्की त्यतिबेलै दिएका थिए,’ श्रेष्ठनिकट एक व्यक्तिले सूत्रन्यूजसँग भने, ’तर आफूले गल्ती नगरेको भन्दै नारायणकाजी कमरेडले जे बाहिर ल्याएपनि फरक नपर्ने जवाफ दिएर फर्किनु भएको थियो । आखिर त्यतिबेला ओलीले दिएको धम्कीअनुसार भिडियो बाहिर आइछाड्यो ।’
प्रवक्ता श्रेष्ठले आफूविरुद्ध कसैले राजनीतिक षड्यन्त्र गरेको दाबी गरेका छन् । ’कमानसिंहजीले मिलाइदिनुस भनेपछि मैले मध्यस्थता गर्न खोजेको हो,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ’याम्लिङ हाइड्रोपावरको सेयर कमानसिंहजीले कसैलाई बेच्नुभएको रहेछ र पैसा पाउनु भएको थिएन । उहाँले साथी भएको नाताले मलाई मिलाइदिन पहल गर्नुस न भनेर भन्नुभयो । त्यही अडियो भिडियोलाई बाहिर ल्याएर अहिले सुनियोजित प्रचारबाजी गरिँदैछ ।’
उनले पार्टीभित्र बढेको अन्तरविरोधका कारण आफ्नो चरित्रहत्या गर्न लागिएको पनि दाबी गरे । ’मैले नेपालको राजनीतिमा हुने भ्रष्टाचारको विरोध गरेको थिएँ । अझै पनि गरिरहन्छु । त्यो कसैलाई मन परेको छैन र मेराविरुद्ध सुनियोजित प्रचार गरिएको छ । यस्ता कुराबाट भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गर्छु ।’
लामाकी कान्छी श्रीमती इन्द्रमाया तामाङले श्रेष्ठ निर्दोष रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनले एक अनलाइनसँग कुरा गर्दै भनेकी छन्, ’सिन्धुपाल्चोकमा रहेको ७.२७ मेगावाट क्षमताको याम्लिङ हाइड्रोपावरमा हाम्रो लगानी हो । नारायणकाजी श्रेष्ठकी स्वकिय सचिव सुशान कर्माचार्य आफैले शेयर लिएको होइन । दुई वर्षअघि यो हाइड्रोपावरको शेयर (साढे दुई करोड) लिइदेउ भनेर मेरो श्रीमान (कमानसिंह) आफैले अनुरोध गरेको हो । सुशानले ‘दाईसँग काम गर्न म सक्दिनँ’ भनेर बारम्बार जवाफ दिएकी थिइन् ।’
इन्द्रमायाले यदि सुशान कर्माचार्यले शेयर नलिएको भए त्यो हाइड्रोपावरको लाईसेन्स खोसिनेवाला रहेको पनि बताएकी छन् । ’त्यो बचाउनकै लागि हामीले शेयर जबरजस्ती दिएका हौँ,’ उनले भनेकी छन्, ’नारायणकाजी श्रेष्ठ दाईको के दोष थियो ? मेरो श्रीमानले नै बारम्बार सुशानलाई शेयर लिइदिनुस् राम्रो हुन्छ भनेर भनेर लगाउनु भएको हो । नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यो भिडियोमा पनि केही बोल्नु भए जस्तो लाग्दैन । मेरो श्रीमान, म र सुशान सबै आफ्नै परिवारको मान्छे भन्नु भएको छ नी ।’
श्रेष्ठको चरित्रहत्या भयो: याम्लिङ हाइड्रोपावर
’नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशलाई जोडी उहाँको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले आएका भ्रामक कपोलकल्पित एवं राजनीतिक दुरासययुक्त भावनाले यस्ता कुरा सञ्चारमाध्यममा आउनु दुर्भाग्य हो,’ हाइड्रोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’कमानसिंह लामाले उठाएको विवादलाई उहाँकै अनुरोधमा समाधान गर्ने प्रयास स्वरूप भएको छलफललाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।’